के तपाईं कहिल्यै याद छ कि केही मान्छे , र स्मार्ट र सुन्दर, र पनि केही सामाग्री सामान संग, तर तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भाग्यमानी थिएनन्। जस्तै र कसैले भेट्न चाहन्छु, सायद एक परिवार शुरू, तर मा सूर्य अन्तर्गत रोमान्टिक टहलने तल छैन जाँदै छ।
विपरीत सेक्स को प्रलोभन को रहस्य
एक मान्छे त्यो केटी गर्न indifferent छैन जब व्यक्ति ध्यान ड्र कसरी लाग्छ? ठीक छ, दर्पण देखिन्छ भने तपाईं एक चमकदार पत्रिकाको आवरण मा मोडेल मा, या एक दैनिक आधार कमी ठूलो बिल मा एक पर्स, र त्यहाँ आफूलाई चलाउन पछि गरिनेछ समावेश गर्न आवश्यक छैन। र के बाहिरी यसको कमियां छ जसको खल्ती जवान विशेषज्ञ तलब (मा सबै भन्दा राम्रो), र जवान बारेमा? तपाईं पक्कै पनि तल, अनुहार र zashugannyh आँखा मा चश्मा एक "खैरो माउस" फेला, तर ठीक छोटो मिनी-स्कर्ट वा कम-कट मा एक सोशलाइट खींचती गर्न सक्नुहुन्छ। एक सानो केटी मनोविज्ञान, को प्रश्न थाहा छ भने "कसरी मान्छे ध्यान आकर्षित" उत्पन्न गर्दैन।
सबै को पहिलो, कार्य गर्न नडराऊ। तपाईं पहिलो कदम लिन भने, आफ्नो जीवनको प्रेम अर्को जाने सक्छ, र अझै पनि सपना गरिनेछ। तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ पहिलो पटक, त्यो एक व्यस्त तालिका हवाला, बस इन्कार गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई छैन। तर यो तपाईं परित्याग र विहारको जाना होइन। यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो मा हुन गरेनन्? चौथो अन गर्न निश्चित हुनुहोस्! सबै महिला भिन्न छन् र पुरुषहरु attentions सबै पनि फरक फरक कार्य। रोमान्टिक, biker, Rapper, तपाईं निश्चित आना चाहिए कुनै पनि तरिका हुन नडराऊ। तपाईं पराई को भूमिका निर्वाह गर्न रुचि छैन? आफैलाई हुन, र तपाईं संलग्नता घन्टी स्वीकार गर्न र छोराछोरीलाई छ सहमत एउटा फेला पार्न पक्का छन्।
पुरुष आधा को वैश्विक समस्या
एक घर निर्माण गर्न, एक छोरा हुर्काउन, तपाईं पहिले पत्नी प्राप्त गर्नुपर्छ। र कसरी एक फेला पार्न र लगभग सबै महिला व्यक्तिहरूलाई एक सहयोगी वा मित्र रूपमा हेर्न भने मात्र? एक मान्छे बालिका को ध्यान, मेरो आँखा, demeanor वा वाक्यांश समातिए कि विशेष गरी एक आकर्षित रूपमा?
एक सानो को ध्यान आकर्षित, तपाईं मुख्य लक्ष्य राख्नुपर्छ - नै यो प्रेम पर्नु गर्न, र यो उनको विवाह गर्न राम्रो छ। मानवता को एक उत्कृष्ट आधा गर्नेछ विकल्प छैन एक विशाल संख्या राति सुत्न र तपाईं को विचार, तर सबै उत्तिकै वस्तु sighs कथित छैन।
शुरुआती लागि सुझाव
सबैलाई थाह थियो भने मान्छे ध्यान आकर्षित, केटी लामो roost शासन थियो, र मानिसहरू नयाँ तरिका र चाल संग आएको थियो। सबै को पहिलो, परिणाम (नकारात्मक - यो पनि परिणाम हो) प्रभावित हुने:
जवान (या त जवान छैन) व्यक्तिको चरित्र;
आफ्नो परिचय वा कुराकानीको समयमा उनको मुड;
दिन को समय;
के तपाईं "निलम्बित" भाषा र हास्यास्पद कथाहरू र उपाख्यानों को एक विशाल संख्या थाहा छ भने, त्यो पक्कै पनि महिला को 70 प्रतिशत, को "जोकर" को बाँकी 30 प्रतिशत कष्टप्रद हुन् भनेर हुक हुनेछ। एक विश्लेषणात्मक मन र ज्ञान को एक विशाल राशि, पनि, आधा को खोज मा बन्द तिर्ने छ। यो हास्यास्पद छ, तर केटीहरू केही, "चुम्बन" एक घर वा महंगा कार मा राम्रो मरम्मत मा, तर यो आफ्नो मिसिन निर्दिष्ट गर्नुभएन, वा तपाईं उनको एक मित्र बाट एक सवारी लिएका छन्। यो पनि केही महिला Eau डे को सुखद सुगन्ध प्रतिरोध गर्न सक्ने अवलोकन छ। त्यो, pheromones, तपाईंलाई एक चुम्बक गर्न आकर्षित गर्छ। यहाँ र भन्दै बिना जान्छ, मान्छे ध्यान आकर्षित गर्छ। तपाईं एक स्नान वा शवर बेवास्ता भने, र आफ्नो लुगा हेर्न छैन शौचालय, पानी बेकारी हुनेछ। कुनै पनि मान्छे ध्यान आकर्षित गर्छ। यो प्रलोभन आफ्नो रहस्य के हो भनेर निर्णय गर्न मात्र आवश्यक छ।
सम्झना गर्न नियम
तपाईंले केही प्रयासहरू आफ्नो sighs को वस्तु प्राप्त गर्न सकेन भने, त्यसपछि यो केटी बारेमा भूल, त्यो तपाईं को लागि छैन!
प्रत्येक महिला व्यक्तिगत छ। यो सबै भन्दा महिलाहरु को प्रकृति मा निर्भर गर्दछ किनभने तपाईं विवाहपूर्वको को एक साधारण तरिका चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि "आफ्नो टाउको भन्दा उच्च कूद," तपाईं कुनै पनि केटी प्राप्त गर्न सक्छन्, तर सबै आफ्नो दिन को अन्त सम्म तपाईं संग हुन चाहन्छु।
हरेक लक्ष्य आफूलाई सफाइ गर्न सक्षम छ। सधैं एक सुन्दर टाउको विचार गर्न र न्यानो हृदय प्रयास गर्नुहोस्।
कुरा भन्दा राम्रो
सबै हामी धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर शब्दहरू, मात्र पहिलो दुई वा तीन मिति बचत गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईं कार्य गर्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईं सबै भन्दा राम्रो के के गर्न छ। यसको अपील को सकारात्मक विशेषताहरु जोड। बस एक शब्दकोश रूपमा सूची छैन, सबै व्यवहार मा देखाउन राम्रो।
तपाईं उनको आफ्नो ओछ्यानमा madly हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, अन्तिम गर्न त्यो क्षण ढिलाइ गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। एक बिट, रोमान्टिक बौद्धिक, राम्रो हास्य र दूरदर्शी साथ। बाल्यकाल मा यो डिप, उनको मानिसको हात को मजबूत र विश्वसनीय सुरक्षा महसुस जो एक सानो फेरि, केटी बस्न।
एक मानिस केही कुराहरू के गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यदि तपाईं पर्खाल मा सकेट र हथौडा नङ समाधान गर्न सक्दैन, त्यसपछि जानुहोस् र सिक्न र यसको स्थान लिन कसरी सोच्न छैन। मान्छे ध्यान कसरी आकर्षित पत्ता लगाउन, तपाईं पहिलो कि वास्तवमा को एक कुरा रूपमा निर्धारण, उहाँले पर्छ - मानिस। केटी को ध्यान आकर्षित गर्न एक साँचो सज्जन मात्र गाह्रो छैन, बाँकी आफ्नो गल्तीबाट सिक्नु हुनेछ।
कसरी मान्छे संग कुराकानी गर्न सिक्न? उचित व्यवहार को रहस्य।
कसरी राम्रो मानिस बन्न: विचार मा
जहाँ यो हिउँदमा न्यानो छ तपाईंलाई?
जब चर्च Sergiya Radonezhskogo (Nizhny Novgorod) निर्माण? घटना को इतिहास
कारण र क्रोनिक appendicitis को लक्षण
एक रोटी निर्माता एलजी लागि राम्रो नुस्खा
बोरिस Gittin - जीवनी र सिनेमा
कसरी साँप को एक बल गर्न: निर्देशन
Cardigan बुनाई बुनाई। शाल र निःशुल्क व्यापक खुला शीर्ष - बकसुआ गर्न व्यापक नितम्ब तंग उपयुक्त बेल्ट, कलर संग सुरुचिपूर्ण मोडेल
उत्तर काकेशस को रिसोर्ट्स: समीक्षा। उत्तर काकेशस रिसोर्ट्स विकास
किशमिश: उपयोगी गुणहरू